Kusazovela imikhuba yabafundisi: oweDiepCity
UMLINGISI weDiepCity, uChrispen Nyathi odlala indawo kaPastor Charles, uthi kusazovela imikhuba yabafundisi ngendawo ayilingisayo Isithombe: SITHUNYELWE
Thokozani Ndlovu | June 7, 2021
UTHEMBISA ukuveza okukhulu ngendawo ayilingisayo kaPastor Charles, emdlalweni wethelevishini iDiepCity kuMzansi Magic, uChrispen Nyathi (27).
UChrispen odabuka KwaBulawayo, eZimbabwe kodwa osezinze eNingizimu Afrika, uthi kuningi okuzovela ngabafundisi bamanga nemikhuba engcolile abayenzayo becasha ngokholo.
“ Okwamanje abantu basabona uPastor ozilungele kodwa kusazovela okukhulu ngale ndawo. Inhloso yayo ukuvezela abantu ngezinto ezenzeka emabandleni nemikhuba egilwa ngabanye abafundisi abakhohlisa abantu becashe ngebhayibheli. Abantu bazomangala ngokuzokwenzeka ngoba indawo engiyilingisayo iyakhula,” kuchaza uChrispen.
Uthe ukulingisa yinto ayithande kusuka esemncane emva kokulingisa emidlalweni yeshashalazi esesemabangeni aphansi esikoleni. Emva kwalokho uthe akabuyanga wathola ithuba lokulingisa, kuze kuba uza eNingizimu Afrika.
“ Ngesikhathi ngifika eNingizimu Afrika ngo-2009 ngiqale ngazama inhlanhla ekulingiseni emidlalweni yethelevishini kodwa kungalungi. Obekwenzeka ukuthi bengithola indawo yokuba wumdlali owengeziwe, okuba lukhuni nokuthi abantu bamazi ngoba usuke ungakhulumi lutho kulowo mdlalo ngaphandle kokubonakala udlula nje kuphela noma uhleli. Ngize ngazama nenhlanhla emidlalweni yeshashalazi nakhona izinto zangagqama kahle. Ngize ngaba nenhlanhla ngo-2019 ngithola indawo emfishane kwifilimu yaseHollywood, iRogue. Emva kwalokho ngiphinde ngathola iziqephu ezine kwiThe Queen,” kulandisa umlingisi.
Uthe emva kokuvela kwiThe Queen uthathe isinqumo sokuthi angabe esavuma ukunikwa indawo yokuba wumlingisi owengeziwe emidlalweni, kanti uzoba nenhlanhla yokuthathwa kwiDiepCity.
Indawo ayilingisayo uthe isondelene nempilo yakhe yangempela njengoba ekhonza ebandleni labasindisiwe iPentecostal Church, elixube izinhlanga ezehlukene. Kulo mdlalo udume ngamahlaya njengoba ebuye athandaze ngezilimu kuhle kwabazalwane uma sebevukwe wumoya.